यी समस्या समाधानका लागि संसद् अवरुद्ध गर्नैपर्छ भोगिरहेका तर दृढतापूर्वक प्राथमिकताका साथ नउठाइएका समस्याहरू
आजको न्युज आइतबार, २२ वैशाख २०७६
नेपालको सबैभन्दा विकास भएको स्थान भनौं वा नेपालको राजधानी काठमाडौंको परिवेशलाई नियाल्ने हो भने यहाँ सुविधा कम र समस्या धेरै देखिन्छन् । देशको राजधानी काठमाडौंको त राम्रो विकास भएको छैन, देशका अन्य ठाउँको हालत कति दयनीय होला ? प्रसंग विचारणीय र सोचनीय छ ।
काठमाडौंको सबैभन्दा ठूलो र गम्भीर समस्या भनेको खानेपानीको अभाव हो । दैनिक हरेक व्यक्तिले भोगेको यो समस्या मेलम्चीको सपना देखेर सधैं ब्युझन्छ र खानेपानीको अभावको यथार्थलाई अनुभूत गरेर उदासीनतामा निदाउन विवश छ । खानेपानीको यो गम्भीर समस्यालाई लिएर काठमाडौंबासीले यदाकदा रित्तो गाग्रोको जुलुस प्रदर्शन गरेको देखियो । तर खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्चीको समस्या मात्र होइन, प्राथमिकता दिएर संसद्मा यो समस्याको निरन्तर उठान हुनुपर्छ, जुन खासै भइरहेको छैन । र खानेपानी अभावको यो गम्भीर समस्यालाई लिएर आजसम्म संसद्को बैठक अवरोध गरिएको छैन । किन ?
खानेपानी अभावको समस्या नेपालको प्रमुख समस्याको रूपमा अगाडि आउँदै छ । धेरै पहाडी भूभागमा र तराईका उत्तरी क्षेत्रमा अहिले खानेपानीको अभावको समस्या प्रचुर मात्रामा देखिएको छ । तराईका केही प्रमुख नदीहरू बाहेक अन्य नदीहरूमा पानी देखिँदैन । बालुवा मात्र देखिन्छ । खोलाको दोहन प्रशस्त भइरहेको छ । खोलाबाट अनियन्त्रित र गैरकानुनी तरिकाले ढुङ्गा र गिट्टीबालुवा निकाल्ने कार्य धमाधम भइरहेको छ । बाढीले कटान गर्ने र पहिरो जाने क्रम बढ्दो छ । यसमा कसैको चिन्ता छैन । नदीको गैरकानुनी र अवैज्ञानिक दोहन गरेर पैसा कमाउनमा मग्न छन् मान्छेहरू ।
केही समयपछि खानेपानीको अभावका कारण तराई र पहाडबाट बस्तीका बस्ती विस्थापित हुन समय लाग्दैन । आम मानिससँग सरोकार यो विषय संसद्मा निरन्तर प्राथमिकताका साथ उठ्नुपर्छ ।
मुलुकको राजधानी प्रदूषणले ग्रस्त छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका सबै नीति निर्माणकर्ताहरू र प्रमुख व्यक्तिहरू राजधानीमा दैनिक प्रदूषणमा स्वास फेर्न विवश छन् । सबै राजनीतिक दलका प्रमुख व्यक्ति राजधानीमै बस्नुहुन्छ । स्थानीय निकायमा निर्वाचित मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू पनि यही प्रदूषित वातावरणमा बाँचिरहेका छन् । देशभरिका मानिसहरू दैनिक प्रदूषणमा बाँच्न बाध्य भइरहेका छन् । तर यो विषय प्राथमिकताका साथ संसद्मा निरन्तर किन उठ्दैन ?
बेलैमा बुद्धि पु¥याएर निरन्तर काम गर्ने र कडा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपाल र यसको राजधानीलाई प्रदूषण मुक्त बनाउन सकिन्छ । प्रदूषणलाई रोक्नका लागि एउटा निश्चित मापदण्ड तय गरी गाडी र मोटरसाईकललाई ‘ग्रीन स्टिकर’ दिने कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्नु पर्छ । कसैले पनि मापदण्ड विपरीत कुनै गाडी वा मोटरसाइकललाई ‘ग्रीन स्टिकर’ दिएमा त्यस्तो कार्यलाई जघन्य अपराध सरह मानी सो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई आजीवन काराबासको सजाय दिने कडा कानुन ल्याउनुपर्छ ।
मापदण्डभन्दा बढी धुँवा उड्ने गाडी वा मोटरसाइकललाई चलाउन नदिने र कसैले ग्रीन स्टिकर नपाएको सवारीसाधन चलाएमा उसको ड्राइभिङ लाइसेन्स खारेज गर्ने र सवारीसाधन जफत गर्ने र साथै १० (दस) लाख रूपैयाँ जरिवाना गर्ने कडा कानुन संसद्बाट ल्याउनुपर्छ र त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यो गम्भीर विषयमा संसद्मा प्राथमिकताका साथ निरन्तर आवाज उठाएर संसद् किन अवरुद्ध पारिँदैन ?
राजधानी लगायत देशभरमा घरभाडा महंगो छ । घरधनीहरूले घर बहाल कर धेरै कम तिर्ने गरेका छन् । सबैले देखेको र भोगेको यो समस्या सदनमा किन निरन्तर उठ्दैन ? राजधानी लगायत देशभरका प्रमुख शहरमा अनियन्त्रितरूपले जग्गाको भाउ बढेको छ । जग्गाको मूल्य र घर बहालको दरसम्बन्धी कुनै नियम, कानुन र एकरूपता छैन । मनलाग्दी छ । जसलाई जति मन लाग्छ उसले त्यति लिएको छ । कुनै सरकारी नियम र नियमन छैन ।
राजधानी लगायत देशभर सबै स्थानमा जग्गाका दलालहरूको बिगबिगी छ । ऐलानी, सार्वजनिक र सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा ल्याउने काम दिन दुई गुणा र रात चौगुणाको हिसाबले बढिरहेको छ । तर सम्बन्धित निकाय मूकदर्शक जस्तै बसेको देखिन्छ । यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने एक दिन नेपालमा ऐलानी, सार्वजनिक र सरकारी जग्गा रहने छैन । सबैले प्रत्यक्ष देखेको र भोगेको यो गम्भीर समस्याको विषयमा संसद्मा निरन्तर किन आवाज उठ्दैन । यो विषयमा संसद् किन अवरुद्ध हुँदैन ?
नेपालका अधिकांश स्थानको सडक हेर्ने हो भने दादुरा रोग लागेर खाल्टाखुल्टी परेको अनुहार जस्तो देखिन्छ । देशभरका पुल जीर्ण हुँदै गइरहेका छन् । सडक दुर्घटनाको कारणले सयौंको संख्यामा मानिसहरू मृत्युको शिकार भइरहेका छन् । सडक विभागका कर्मचारी मोटाएको मोटाएकै छन् । केही सीमित ठेकेदारहरूले कमाएको कमाएकै छन्, करोडपति भएको भएकै छन् । कसैलाई कुनै गम्भीर चिन्ता र चासो छैन ।
सडक र पुलहरू जीर्ण भइसकेका छन् । सडकमा मानिस हिँड्न सडक छेउमा पेभमेन्ट छैन । अब सबै सडकहरूको डिजाइन गर्दा सडकको छेउमा मानिस हिँड्नका लागि कम्तीमा २४ फिटको पेभमेन्ट राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । पुलको डिजाइन गर्दा मानिस हिँड्न फराकिलो पेभमेन्टको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने कानुन ल्याउनुपर्छ । सडक विभागका कर्मचारीलाई कुनै मतलब छैन । कानुन मौन छ र कर्मचारीहरूको मौनताले त्यसमा निस्तब्धता थपेको छ । यस्तो गम्भीर विषय निरन्तर प्राथमिकताका साथ संसद्मा उठ्नुपर्छ । तर किन निरन्तर उठिरहेको छैन, यो गम्भीर विषय ?
आजसम्म सडक विभागबाट निर्माण भएका सडक र पुलहरूको निर्माणमा भए गरेका काम कार्बाहीको विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । जुनजुन व्यक्तिले अनियमितता गरेका छन् वा भ्रष्टाचार गरेका छन्, उनीहरूलाई कानुन बमोजिमको कार्बाही हुनुपर्छ । यस्तो विषयमा निरन्तर प्राथमिकताका साथ संसद्मा आवाज उठाउन सक्नुपर्छ र आवश्यकता भएमा यस्तो गम्भीर विषयमा संसद् अवरोध गर्न सक्नुपर्छ । तर अवस्था लाजमर्दो छ । किन ?
सडक वरिपरि फोहोरको डंगुर हुन्छ । मानिसहरू घरको कौसीबाटै सडकमा वा घरको फोहोर सडकमा लगेर फ्याँक्ने गरिरहेका छन् । हामी आफूलाई शिक्षित र सभ्य भन्छौं तर फोहोर सडकमा सदैव फ्याँकिरहेका हुन्छौं । यसले सडक मात्र होइन, सम्पूर्ण शहर र वातावरण नै फोहोर र दूषित बनाइरहेको हुन्छ । ढल र फोहोरमैलाको व्यवस्थापन हुन नसक्नु काठमाडौं लगायतका सम्पूर्ण शहरी क्षेत्रको प्रमुख समस्या हो । यसैले जुन व्यक्तिले सडकमा जथाभावी फोहोर फ्याल्छ, उसलाई कम्तीमा १० लाख रूपैयाँ जरिवाना गर्ने कडा कानुन संसद्बाट पास गर्नुपर्छ । ढल तथा फोहोरमैलाको व्यवस्थापनको विषयमा गम्भीरतापूर्वक र प्राथमिकताका साथ संसद्मा निरन्तर आवाज उठाउनु पर्छ ।
सार्वजनिक शौचालयको अवस्था हेर्ने हो भने अत्यन्त दयनीय छ । अस्पतालको शौचालय होस् वा विद्यालय, क्याम्पस वा विश्वविद्यालयको शौचालय होस्, फोहोरको डंगुर फैलिएको हुन्छ । गन्हाएर भित्र छिर्न नसकिने किसिमको हुन्छ । विभिन्न सरुवा रोगका कीटाणुको बास हुन्छ । मन्त्रालयदेखि कार्यालय हुँदै सडकको पेटीमा वा मन्दिरको छेउमा भएका शौचालयहरूको अवस्था एकैनासको छ । फोहोरको डंगुर फैलिएको, गन्हाउने र दुर्गन्धित । यस्तो गम्भीर विषयमा संसद्मा छलफल नै हुँदैन ।
अस्पताल, विद्यालय, क्याम्पस, विश्वविद्यालय, कार्यालय, होटल, रेन्टुरेन्ट, मन्त्रालय, पसल लगायत मन्दिरको छेउमा र सडकको पेटीमा भएको शौचालय सफा नराख्नेलाई प्रत्येक पटक कम्तीमा २० लाख रूपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने कडा कानुन संसद्बाट पास हुनुपर्छ । सार्वजनिक शौचालय अनिवार्य रूपमा स्वस्थ्य, सफा र सुग्घर राख्नुपर्ने र यदि त्यसो नगरेमा प्रत्येक पटक बीस लाख रूपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने कडा कानुन संसद्बाट पास गर्न लाग्नुपर्छ । यदि संसद्बाट त्यस्तो कडा कानुन नबनेमा संसद् घेराउ गर्नुपर्छ । सार्वजनिक शौचालय स्वस्थ, स्वच्छ र सफा राख्ने कडा कानुन निर्माण गर्नका लागि किन संसद् अवरुद्ध हुँदैन ?
नेपालमा खाद्य सामग्रीमा मिसावटले सीमा नाघिसकेको देखिन्छ । खानेपानीदेखि दूधदही हुँदै खाने अन्नहरूमा पनि अत्यधिक मिसावट भएको पाइन्छ । कम्पनी, पसल, होटेल वा रेन्टुरेन्टहरूमा दिइने खाद्य पदार्थमा पनि अत्यधिक मिसावट हुने, सफा नहुने, स्वस्थ नहुने र केही खानाहरू बासी पनि हुने तथ्य फेला परेको छ । यो जघन्य अपराध हो ।
शुद्ध, स्वच्छ, स्वस्थ्य, ताजा र सफा खाद्य पदार्थ खान पाउनु हरेक मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो । तर कम्पनी, पसल, होटेल र रेन्टुरेन्टहरूले मिसावटयुक्त र बासी खाद्य पदार्थ उत्पादन र बिक्रीवितरण गरिरहेको देखिन्छ । यदि कुनै पनि होटेल, पसल र रेस्टुरेन्टले मिसावटयुक्त र बासी खाद्य पदार्थको उत्पादन वा बिक्रीवितरण गरेमा कम्तीमा ५० लाख रूपैयाँ जरिवाना गर्ने र होटेल, पसल र रेस्टुरेन्टको लाइसेन्स नै खारेज गर्ने कडा कानुन संसद्बाट पास हुनुपर्छ । स्वच्छ, स्वस्थ्य, सफा, शुद्ध र ताजा खाद्य पदार्थ हरेक होटेल, रेस्टुरेन्ट, कम्पनी र पसलले उत्पादन र बिक्रीवितरण गर्नुपर्छ । यदि त्यसो नभएमा कम्तीमा ५० लाख रूपैयाँ जरिवाना गर्ने कानुन संसद्बाट पास नभएमा सो कानुन निर्माणका लागि संसद् घेराउ गर्न सक्नुपर्छ ।
हरेक नेपालीले दैनिकरूपमा भोगिरहेका तर दृढतापूर्वक निरन्तर प्राथमिकताका साथ नउठाएका यी र यस्ता धेरै प्रकारका समस्याहरू छन् जसलाई गम्भीरतापूर्वक निरन्तर संसद्मा र समाजमा उठाउनु पर्छ । मानिस र समाजले दैनिक भोगिरहेका समस्याहरूलाई संसद्मा प्राथमिकताका साथ निरन्तर उठाएर त्यसलाई सामाजिक जागरण र राष्ट्रिय जागरणको राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनु पर्छ ।
दैनिकरूपमा आम नेपालीले भोगिरहेका समस्यालाई संसद्मा कडा कानुन बनाएर र सो कानुनको कार्यान्वयन गराएर समाधान गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । राष्ट्रिय जागरण र सामाजिक जागरण अभियानमा दैनिकरूपमा आम नेपालीले भोग्नुपरेका समस्यालाई प्राथमिकताका साथ दृढतापूर्वक मुद्दाको रूपमा उठाउनु पर्छ ।
आम नेपालीले भोगिरहेको समस्या समाधान गर्न संसद्मा कानुन बनेन वा बनेको कानुनको कार्वान्वयन भएन वा विधिको शासनको प्रत्याभूति भएन वा सुशासनको अनुभूति हुन सकेन भने आवश्यकता अनुुसार संसद् अवरुद्ध पनि गर्नुपर्छ । ताकि आम जनतालाई प्रत्यक्षरूपले अनुभूति होस् कि हाम्रो जनजीविका र समस्यासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा संसद् अवरुद्ध भइरहेको छ । यस्तो मुद्दामा आम जनताको भावनात्मक साथ, सहयोग र समर्थन पाइन्छ ।